एसएसपीले यु’वतीसँग ‘मु’ड फ्रे’स गरौ’ भनेपछी यस्तो सम्म भयो .. – Life Nepali
एसएसपीले यु’वतीसँग ‘मु’ड फ्रे’स गरौ’ भनेपछी यस्तो सम्म भयो ..
काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित तथा जि’म्मेवार व्यक्तिहरु नै ब’ला’त्का’र आ’रोपमा प’क्राउ प’र्न था’लेका छन् । अघिल्लो वर्ष त’त्कालीन स’भामुख कृ’ष्ण’बहादुर म’ह’राबाट शुरु भएको यौ’न प्र’करण अहिले स’शस्त्र प्रहरी एसएसपीमा आइपुगेको छ ।स’शस्त्र प्रहरीको हु’ल तथा दं’गा व्य’वस्थापन शि’क्षालय, ला’मपाटन पोखरामा का’र्यरत एसएसपी राजेन्द्र अधिकारी ब’ला’त्का’र आ’रोपमा प’क्राउ प’रेका छन् । एसएसपी अधिकारी युवती ब’ला’त्का’र आ’रोपमा बुधबार साँझ पक्राउ प’रेका हुन् ।
बुधबार बिहान साँढे ८ बजे २६ वर्षीया युवती आफ्नो स्कुटी चढेर एसएसपी का’र्यालय पुगिन् । कार्यालय प’रिसरमा स्कुटर राखेर उनी स’रासर एसएसपीको निवासमा प’सिन्। प्रहरीको नि’गरानी र सु’रक्षा घे’राभित्रै रहेको एसएसपीको नि’वास ती युवती पहिल्यै देखि आउँथिन् । हा’किमलाई भेट्न सधै आइरने युवतीलाई गे’टमा रहेका सु’रक्षाकर्मीले रो’क्ने कुरा भएन् । बुधबार पनि ती युवती वि’गतमा जस्तै एसएसपीको निवास प’सेकी थिइन् । तर यस पटकको घ’टना भने विग’तमा जस्तै गुप’चुप रहेन ।एसएसपी अधिकारी र यु’वतीबीचको स’म्बन्ध छ’ताछुल्ल हुन पुग्यो ।
कार्यालयका अन्य सु’रक्षाकर्मी चियाको चु’स्की लिँदै थिए । तर उनीहरुले बिहानै म’दिरामा र’मे । एसएसपी अधिकारी र युवती ब’सेको को’ठामा एकाएक डा’ङडुङ आ’वाज आयो ।हा’किम सा’पको को’ठामा के भएको हो ? का’र्यालयका अन्य सु’रक्षाकर्मीले समेत चा’सो लिए । युवतीले आफूलाई एसएसपीले ब’ला’त्का’र गरेको भनी नेपाल प्रहरीको क’न्ट्रोल नम्बर १०० मा फोन गरिन् । युवतीको फोन लगत्तै सशस्त्रको मुक्तिनाथ बा’हिनीका डिआइजी कविन्द्रमान प्रधान र एसएसपी जयकुमार खड्कासहितको टो’ली एसएसपी अधिकारी बस्ने निवास पुगे ।
उनीहरु पुग्दा त्यहाँ निकै ह’ल्ला भइसकेको थियो ।अधिकारीको को’ठामा सा’मान अ’सरल्ल थिए । बे’डरुप भ’ताभुङ थियो । प्रधान र खड्कासहितको टो’लीले एसएसपी अधिकारीको को’ठामा भि’याग्राको ३ वटा खो’ल समेत फेला पार्यो । उनीहरुको ना’जायज स’म्बन्ध पु’ष्टि गर्ने अर्के वस्तु रु’मालमा ल’तपतिएको समेत भेटाए । घ’टना जाँ’चबुझपछि अधिकारी पक्राउ परे ।अधिकारी आउँदो माघ १ गते अ’वकास हुने थिए । बु’ढ्यौली बै’शले उनलाई ४९ वर्षको उमेरमा जे’ल अवस्था पुर्’याएको छ ।गृह मन्त्रालयलाई उनलाई प’दबाट नि’लम्बन गरी का’रबाही प्रक्रिया अगाडि ब’ढाइसकेको छ ।
एसएसपी अधिकारी हे’डक्वार्टर ह’लचोक स’रुवा भएको थियो । स’रुवापछि काठमाडौं जानुअघि उनले ‘मु’ड फ्रे’स गरौ’ भन्दै युवतीसँग त्यस्तो ह’र्कत गरेको हुन सक्ने स्रोतको अ’नुमान छ । यु’वती यसअघि पनि एसएसपी अधिकारीलाई भे’ट्न आ’इरन्थिन ।तर पहिला भने उनीहरुको सम्बन्ध रा’म्रौ थियो । तर अहिले युवतीको माग पूरा नहुँदा दु’र्घटना भएको हुने सक्ने स्रोतको भनाई छ । esidhakura
Previous मुलुकै ठूलो मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको सुरुङ फु’ट्नुको का’रण के हो त?
Next कानुनविद् डा.भी’मार्जुनको प्र’स्ताव ! प्र’देशहरु खा’रेज गरौं, त्यो पै’साले नि’जी वि’द्यालयहरु रा’ष्ट्रियक’रण गरौं’